Madaxwaynaha Eritrea oo ka baaqday ka qaybgalka shir madaxeedka IGAD - Halbeeg News
Madaxwaynaha Eritrea oo ka baaqday ka qaybgalka shir madaxeedka IGAD
ADDIS ABABA (HALBEEG) – Madaxwaynaha Eritrea ayaa ka baaqday ka qaybgalka shirka 33aad ee dalalka xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD, kaas oo shalay ka dhacay magaalo madaxda dalka Ethiopia ee Addis Ababa.
Shirka oo sannadkan ajandihiisa ugu weyni ahaa heshiisiinta dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Koonfurta Sudan, waxaa sidoo kale sannadkan qorshuhu ahaa in markii ugu horreysey muddo toban sano ka badan ay kasoo qayb gasho Dowladda Eritrea.
Ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo xukuumadda Asmara kasoo baxay oo ku aaddan sababta keentay baaqashada Afwerki.
Eritrea ayaa Urur Goboleedka IGAD ka baxday sannadkii 2007, kaddib markii ay ka carootay qorshihii ciidamada Ethiopia kusoo galeen Soomaaliya iyo weliba taageerada ay dalalka kale ee ururka xubnaha ka ahi arrintaas u muujiyeen.
Sida uu dhigayo xeer hoosaadka IGAD, dalalka ku jira ururku iyaga ayaa iska leh go’aanka ka bixista iyo kusoo laabashada ururka, waxaana u bannaan in marka ay doonaan isaga bixi karaan, marka ay rabaanna kusoo laaban karaan.
Urur Goboleedka Horumarinta IGAD oo la asaasay sannadkii 1986, waxaa xubno ka ah siddeed dal oo kala ah: Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Sudan, Koonfurta Sudan, Djibouti iyo Eritrea.
Dowladda iyo Bangiga Adduunka oo ka wada hadlay horumarinta adeegga biyaha
Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Finland